Ingiriiska oo isaga baxay midowga Yurub. - Wargeyska Faafiye
Home 2016 June 24 .Warka, Headlines . Ingiriiska oo isaga baxay midowga Yurub.
Ingiriiska oo isaga baxay midowga Yurub.
London-Waddanka Ingiriiska ayaa isaga baxay ururka midowga Yurub oo uu muddo 43 sano ah ka mid ahaa,markii ay inta badan shacabka ku dhaqan Gobollada lasku yiraahdo Boqortooyada midowga UK ku codeeyeen maya.
Codadka laga qaaday 30 Milyan oo Ruux, natiijadoodana lagu dhawaaqay goor dhow ayaa la sheegayaa in 52% ay isku raaceen maya, halka inta oggol kasii mid ahaanshaha midowga Yurubna ay ahaayeen 48% oo keliya, waana markii ugu horeeysay oo ay dadku usoo baxaan cod bixin intaa la’eg tan iyo sanaddii 1992-kii.
Goobaha ugu badan ee ay dadka diiddan Midowga Yurub ka codeeyeen ayaa ah gobolka England, daafaha London iyo Wales,halka gudaha London iyo Scotland ay u codeeyeen kasii mid ahaanshaha Midowga Yurub.
Hogaamiyaha xisbiga UKIP Nigel Farage ayaa natiijada aftida taariikhiga ahayd ku tilmaamay in ay ka dhigantahay maalinta madaxbanaanida Ingriiska.
Lacagta pound-ka Ingiriiska ayaa tan iyo 1985-ki uu hoos u dhac weyn ku yimid, waxaana arrintaasi ay jawaab u aheyd falcelinta ay suuqyadu ka sameeeyeeen isbadalka weyn ee ka dhacay Ingiriiska.
Dalka Britain wuxuu noqonaa waddankii ugu horreeyey ee ka baxay Midowga Yurub tan iyo marki la asaasay, halka waddamo kale oo uu ka mid yahay Turkigu uu xusul duub ugu jiro sidii uga mid noqon lahaa midowga Yurub.
Al-Shabaab oo billowday inay isaga baxdo qeybo ka tirsan Hiiraan.
British citizen arrested in Mogadishu on terror suspicions
Somali Man Sentenced To 18 Months For Running Fraudulent Columbus Tutoring Company.